၂၁ ပင်လုံ ရလဒ် လွှတ်တော်အတည်ပြုချက် ရဖို့ ပြင်ဆင် - EPRP ၀က်ဆိုဒ်တည်ဆောက် ပြုပြင်ဖန်တီးမ
ICT Training for RCSS and Community Organisations (Tachileik)
EPRP ကရင် ရေဒီယုို အစီအစဉ်(၄၉)
EPRP ရှမ်း ရေဒီယုို အစီအစဉ်(၂၄)
၂၁ ပင်လုံဒုတိယအစည်းအဝေးအပြီး ငါးလအတွင်း လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ အကြိမ် ၈၀ ကျော် ဖြစ်ပွားဟုဆို
မြေယာကိစ္စကို ကန့်ကွက်ခြင်းထက် ညှိနှိုင်းအဖြေရှာမှုမျိုး လုပ်ဆောင်သင့်ဟု အစိုးရအား KNU မြေယာဌာနအကြံပြု
ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကြောင်း ရှာဖွေရန် မြောက်ပိုင်းခုနစ်ဖွဲ့ အစည်းအဝေး ကျင်းပမည်
PC နှင့် DPN နဝမအကြိမ် ထပ်မံ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် UNFC ဆုံးဖြတ်
ဆွေးနွေးပွဲရလဒ်များကို အန်စီအေနောက်ဆက်တွဲအဖြစ်သတ်မှတ်ရန် ယူအန်အက်ဖ်စီလိုလား
You are at:Home»အထူးသတင်း ကဏ္ဍ»၂၁ ပင်လုံ ရလဒ် လွှတ်တော်အတည်ပြုချက် ရဖို့ ပြင်ဆင်
Armed ethnic leaders from left, Khun Myint Tun, of Pa-O Nationalities Liberation Organization (PNLO), Saw Lah Bwe, of Democratic Karen Buddhist Army (DKBA), Ywet Sit, of Restoration Council of Shan State/Shan State Army-south (RCSS/SSA), and Mutu Say Po, left, chairman of Karen National Union (KNU) attempt to sign on documents during signing ceremony of Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) between Union Peacemaking Working Committee (UPWC) and armed ethnic organizations at Myanmar International Convention Center (MICC) Thursday, Oct 15, 2015, in Naypyitaw, Myanmar. Myanmar government and eight smaller ethnic rebel armies signedacease-fire agreement to end more than six decades of fighting, but several more powerful groups refused to come on board, signaling that peace will remain elusive for some time to come. (AP Photo/Aung Shine Oo)
၂၁ ပင်လုံ ရလဒ် လွှတ်တော်အတည်ပြုချက် ရဖို့ ပြင်ဆင်
By VOA ( Photo By AP) on	 အောကျတိုဘာ 31, 20170Comments
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၁ရာစုပင်လုံ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံက သဘောတူထားတဲ့ ပြည်ထောင်စု သဘောတူစာချုပ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို လွှတ်တော်တင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပြီလို့ အပစ်ရပ်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လာမယ့် ဒီဇင်ဘာလထဲ ကျင်းပနိုင်ခြေရှိတဲ့ တတိယအကြိမ် ၂၁ရာစုပင်လုံညီလာခံမတိုင်ခင် အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေး ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်တွေ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကိုတော့ မဆုမွန်က စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။ အကြောင်းအရာအပြည့်အစုံဖတ်ရန်
နိုဝငျဘာ 21, 2017 EPRP
နိုဝငျဘာ 17, 2017 EPRP
နိုဝငျဘာ 16, 2017 EPRP